ဗေဒင် – Page3– Alinyaung
လူတိုင်း နေ့စဉ် မျက်နှာပွင့်အောင် လုပ်လို့ရတဲ့ ပီယ ​လေးရှိတယ်​​နော်​
လူချစ်လူခင်ပေါပြီး သွားလေရာ ရောက်လေ ရာမှာ ရန်အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းနဲ့ အားလုံး အဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင် ကူညီသူပေါ၊ ကရုဏာ ထားသူများ၊ မေတ္တာထားသူများ ပေါများတဲ့ ဓာတ် သဘာဝကို ပီယဓာတ်ဟု ခေါ်ပါတယ်။ ပီယဓာတ်နဲ့ နေ့တိုင်း မျက်နှာပွင့်စေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာနည်းပညာတစ်ခု တင် ပြပါမယ်။ အိမ်က […]
တကယ်မှန်တယ်နော်…မယုံမရှိနဲ့ လက် ညှိုး နဲ့ လက်သူကြွယ် ဘယ်ဟာပိုရှည်သလဲ ?
တကယ်မှန်တယ်နော်…မယုံမရှိနဲ့ လက် ညှိုး နဲ့ လက်သူကြွယ် ဘယ်ဟာပိုရှည်သလဲ ? လက် သူကြွယ် ပိုရှည်ရင် နံပါတ် ၁ လက် ညှိုး ပိုရှည်ရင် နံပါတ် ၂ အရှည် ညီတူရင် နံပါတ် ၃ နံပါတ် ၁ သမားသည် = […]
February 25, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
သင့်လက်ဖ၀ါးပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်စဉ်တော်တော်များများ ပါလာပြီးသားလို့ ရှေးလူကြီးတွေက ဆိုကြပါတယ်။ ခုလည်း သင့်ရဲ့လက်ဖ၀ါးပေါ်က နှလုံးလမ်းကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီး သင့်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အနာဂတ်ချစ်သူကို မှန်းကြည့်ရအောင်လားနော်..။ နံပါတ် (၁) အမျိုးအစား ပုံထဲကလို ဘယ်လက်နှလုံးလမ်းကြောင်းက မြင့်ပြီး ညာလက်နှလုံးလမ်းကြောင်းက နိမ့်နေသူတွေကတော့ သတ္တိရှိတယ်၊ ထက်မြတ်တယ် ။ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်း မဆိုင်းမတွ […]
February 21, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဇင်ယော်နီ H_A_A Credit : မနောမယဂမ္ဘီရဂျာနယ် Unicode တဈပတျစာ […]
၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ကြိုတင် လုပ်ဆောင်ထားရမည့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာများ
February 17, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ကြိုတင် လုပ်ဆောင်ထားရမည့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ယတြာများ By DKhitPosted on February 17, 2018 ၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ကြိုတင် လုပ်ဆောင်ထားရမည့် […]
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိပြုရန် ယတြာပြုရန် (၁) ပတ်စာဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၊ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၇) ရက်မှ (၂၃) ရက်အတွင်း . ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိပြုရန် ယတြာပြုရန် (၁) ပတ်စာဟောစာတမ်း . . အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ သွေးထွက်အောင်မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် […]
February 14, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … #ဇင်ယော်နီ #H_A_A Credit : မနောမယဂမ္ဘ္ဘီရဂျာနယ် Unicode တဈပတျစာ […]
February 13, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် တနင်္လာသားသမီးများ၏ တစ်လစာဟောစတမ်း (လင်းညို့တာရာ) “Valentines’Day Editon” ဟောစတမ်းလေးကို ဖတ်ရှုပြီးသည်နှင့် ကွန်မန့်တွင် မိမိဖတ်မိလိုက်သောအချိန်ကို မန့်ပါ။ ပြီးရင် ရှယ်ပေးပါ။ ထိုနေ့အတွက် ထို အချိန်ကာလရှိ ဂဏန်းကို လာဘ်ခေါ်သည့် ဂဏန်းအဖြစ် အသုံးချလိုက်ပါ။ ယခုလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ အဆင်ပြေမည့် လမ်းစများ […]
01.2.2018 မှ 07.2.2018 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
February 2, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
01.2.2018 မှ 07.2.2018 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ကံကြမ္မာက မိမိဘက်မှာရှိနေပါတယ်။ အချစ်ရေးအလွန်စန်းပွင့်နေတဲ့ ကာလပါပဲ။ချစ်သူမရှိသေးသူ ချစ်သူရတတ်တဲ့ကာလပါပဲ။ ချစ်သူနဲ့ နားလည်မှုတွေ မေတ္တာတရားတွေ ကိုတည်ဆောက်နိုင်မဲ့ကာလပါပဲ။အိမ်တွင်းရေး အိမ်ထောင်ရေးတော့အနည်းငယ်ညံ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ စကားများရန်ုဖြစ်ရတာမျိုးကြုံရနိုင်သလို လူလွတ်များကတော့မွေးချင်းမောင်နှမတွေနဲ့ စကားအခြေအတင် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး မိသားစုနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲရတတ်ပါတယ်။ […]